Mandeha miafina sy an-tsokosoko mihitsy no azo ilazàna ny filoha Andry Rajoelina. Namonjy fihaonam-be tany Abou Dabi indray ity farany nandritra ny faran'ny herinandro.
Fiaramanidina manokana mihitsy no nandehanany mba tsy hahafantaran'ny maro hoe lasa izy. Mbola tsy azon’ny mpitondra ankehitriny mihitsy fa ny vahoaka no nifidy azy ary koa ny vahoaka no manakarama ny fitondràna. Mila fantatry ny olona arak’izany ny asa ataon’ny filohan’ny Repoblika fa tsy izay tiany no hatao. Raha tsy izany dia rafitra mpanjaka no mety.